Muxuu ka yiri Frenkie de Jong heshiiska uu Matthijs de Ligt ugu biiray kooxda Juventus? – Gool FM
(Yurub) 20 Luulyo 2019. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Holand iyo kooxda Barcelona Frenkie de Jong ayaa difaacay heshiiskii uu saaxiibkiis hore ee Matthijs de Ligt ugu biiray naadiga Juventus.
Matthijs de Ligt ayaa lagu eedeeyay inuu doorbiday ku biirista kooxda Juventus halkii uu u dhaqaaqi lahaa Barcelona, kahor inta uusan daafaca reer Holand ku sheegin in sababta uu u doortay inuu tago Talyaaniga ay tahay inuu la dhacsan yahay qorsho difaaceedka Talyaaniga isla markaana ay jiraan xiddigo badan uu kaga daydo kubadda cagta.
Laakiin xiddiga kooxda Barcelona ee Frenkie de Jong ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mundo Deportivo” wuxuu ku difaacay heshiiska uu saaxiibkiis Matthijs de Ligt ugu biiray Juventus.
“Waxaan la hadlay qoyskiisa iyo wakiilkiisa, lakiin waxaan qabaa in Juventus ay sidoo kale tahay fursad u wanaagsan isaga, waxaan rajeenayay inuu u ciyaaro Barcelona, balse wuxuu gaaray go’aankiisa”.
“Waan faraxsanahay sababtoo ah Juventus waa doorasho u wanaagsan isaga, inkastoo runtii aan doorbidayay inuu u ciyaaro kooxda Barcelona”.
Intaas kaddib Frenkie de Jong ayaa wuxuu ka hadlay imaatinka Antoine Griezmann iyo wararka lala xiriirinayo Neymar Jr inuu dib ugu soo laabanayo kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Antoine Griezmann aad ayuu u fiican yahay, waan wada hadalnay xilliyadii lasoo dhaafay, Neymar Jr waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka, laakiin go’aanka uu ku soo laabanayo ma ahan mid aniga igu xiran, balse hubaal waan ku faraxi lahaa hadii aan halkaan ku arko”.
“Aniga ahaan Messi waa ciyaaryahanka adduunka ugu fiican, Ousmane Dembélé waa ciyaaryahan da’ayar ah, wuxuu heystaa tayo ku filan uu ku noqon karo ciyaaryahanka ugu fiican adduunka”.